Antontan'isa Marketing amin'ny mailaka | Martech Zone
Ny mailaka dia mitarika hatrany ny paikady fikolokoloana sy fitazonana ny ankamaroan'ny orinasa an-tserasera. Mora vidy, mora ampiharina, azo refesina ary mahomby. Na izany aza, raha manararaotra an'ity haino aman-jery ity ny fikambanana dia hisy vokany izany.
Ny spam tsy nangatahina dia tsy voafehy ary orinasa be loatra no manitsakitsaka ny fe-potoana iasan'ny mpamatsy mailaka sy ny lisitra fanafarana. Amin'ny fanaovana izany dia manala baraka ny lazan'ny mailaka momba ny orinasany sy ny mailaka alefan'izy ireo, tsy hita ireo mpamandrika sarobidy. Handeha mankany amin'ny folder junk mivantana izy ireo.
Araka ity infographic ity, Marketing amin'ny mailaka amin'ny isa: fampiasam-bola mahomby, avy amin'ny Campaign Monitor, ireto ny antontan'isa farany momba ny marketing amin'ny mailaka:
Raha ny an'ny 2018, maherin'ny 3.8 miliara ny olona manerantany mampiasa mailaka. Izay ny antsasaky ny mponina eran'izao tontolo izao!
Matetika ny mpampiasa dia manana adiresy mailaka mihoatra ny iray, ny salan'isa dia 1.75.
Ireo mpampiasa dia mandefa fiaraha-miasa Mailaka 281.1 miliara isan'andro, 195 tapitrisa isa-minitra.
Firenena dimy (Sina, Etazonia, Alemana, Okraina, ary Rosia) no nanisa ny antsasaky ny tany spam mailaka.
The taha salan-tsindry avy amin'ny mailaka (CTR) any Amerika Avaratra dia 3.1%, 4.19% ao amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Angamba ny statistika mailaka manan-danja indrindra zaraina: mpanjifa tonga amin'ny tranokalanao ary manaova fividianana amin'ny alàlan'ny rohy mailaka mandany, amin'ny salan'isa, 138% mihoatra ny mpanjifa hafa!
Ity ny sary feno avy amin'ny ekipa ao amin'ny Campaign Monitor:
Tags: salan'isa ctrmailaka Marketingstatistikan'ny marketing amin'ny mailakamailaka misokatrastatistikan'ny mailakafiry ny mailaka nalefavidiny misokatra